Pcb Technologies - Pandawill Technology Co, Ltd.
Kuwedzera kune ese akajairwa pcb maratidziro atinopa, Pandawill inopawo akati wandei enzira dzekuwedzera dzinogonesa mashandiro emabhodhi ako edunhu zvine chekuita nezvavaida kushandisa, kana kubatsira nematanho ematanho ematanho ekudzikisa basa nekuvandudza throughput kunyatsoshanda.
Inosarudza 'yakaoma goridhe yakanamirwa pamifananidzo: Zvishandiso zvinoda kukwidziridzwa pamwero wepamupendero kana wepasi kubatanidza pamwe nekushandisa kweminwe yegoridhe kana yekubatanidza mapedhi.
Peelable solder mask: Pandawill inopa yakanakisa kushambadzira giredhi inoshamisika solder maski yekushandisa mune akawanda-apfuura thermal gungano maitiro. Iyo peelable resist layer inoshandiswa kuvhara nzvimbo dzisingafanirwe kutengeswa panguva yekushambadzira kwemhepo. Iyi inoshanduka dura inogona kubviswa ipapo zviri nyore kusiya mapedhi, maburi uye nzvimbo dzinotengeswa mamiriro akakwana ehurongwa hweungano yechipiri uye chinhu / chinongedzo kupinza.
Vapofu vias: Zvekugadzira zvakateedzana, laser kuchera ndiyo yega hupfumi, asi kwete chete mhinduro inogoneka. kana prototyping, yazvino CNC (mechina) yekuchera muchina uye akasarudzika matsva maturusi anowanikwa kugadzira michini yakaboorwa maburi ehunhu hwakaenzana uye anokwana zvakaenzana mutengo kushanda.
Akazadzwa vias: Pane akati wandei akazadzwa kuburikidza nesarudzo kuti uenzane nezvaunoda. Vias inogona kuzadzwa neyakaitisa simbi yekumisikidza kuenderera, epoxy resin yekushandisa iko iyo PCB inogadzira chinodzivirira mukati mekushandisa kwakachengeteka uye mhangura yakazadzwa kubatsira nekupisa tembiricha pasi pezvinhu zvakafanana nechizvarwa chemukati mekupisa pabhodhi.
Carbon Dhinda: Carbon inoshandiswa kune keyboard uye LCD macontact uye pini dzekubata. Iyo lacquer inoenderana nekabhoni uye inogona kuiswa nyore nyore kumeso nekuda kweiyo hombe yezvinhu zvakasimba.
Kudzora impedance: inodzorwa impedance inonyanya kudiwa muiyo microwave tekinoroji, nhepfenyuro, mauto nemawindaneti. isu tinongoshandisa zvinhu zvakasimbiswa neinodzorwa dielectric kugara (Dk) uye kurasikirwa tangent / dissipation zvinhu (Df) uye nekupa bvunzo yakakodzera kuti ifanane neyako yekushandisa zvinodiwa.